Idaacadaha sida Tooska ah looga Dhageesto Magaalada Muqdisho: « AYAAMO TV
Idaacadaha sida Tooska ah looga Dhageesto Magaalada Muqdisho: by Maamule b 1 of 1
1903 Views Date March 6th, 2014 time 5:01 pm
Idaacadaha kusoo Badanaayo Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya oo Danaha gaarka ah loo Furtay ayaa waxaa ay Jahwareer iyo Waali ku Beereen Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Shacabka reer Muqdisho kala Garan la’a FM-Yada Muqdisho iyo Sida ay u kala Shaqeeyaan.
Idaacadaha ayaa waxaa ay isku Tilmaamaan kuwo Madax banaan oo aan cidna u Janjeerin Balse Xaalka Sidaa ma ahan waa kuwo Dano Huwan oo Dibadaha Laga Taakuleeyo Waxayna ku Shaqeeyaan hadba Meesha Dhaqaalaha iyo Danta Beesha ku Jirto.
Shacabka ayaa waxaa ay kala garan layihiin Idaacada ay Wararka Kala Socdaan oo ay ku Xirnaadaan Maadaama ay Dhamaan Wada Luqud ku Hadlayaan oo Hal Waqti Wararka iyo barnaamijyada Soo Daynayaan oo ay dhamaana Isku barnaamij yihiin.
Dhamaan Barnaamijyada Idaacadaha Magaalada Muqdisho ka Baxa ayaa isku mid ah oo waxaa kaliya ay ku kala Duwan yahiin Magaca Barnaamijka iyo Magaca Idaacada sidaa Awgeed Shacabka Reer Muqdisho ayaa Jahwareersan.
Shacabka Qaar ayaa waxaa ay ka dheeraadeen oo iska fogeeyeen Wax Walba ay ka dhageysan karaan Idaacadaha ama FM-yada kadib dhibaato Dhanka Maskaxda ah ay kala Kulmeen iyo Jahwareer.
Tusaale Dhamaan Idaacadaha Magaalada Muqdisho Habeenkii 9:30 ilaa 10:30 waa isku Wada Mid Waxba Kuma kala Duwno oo waa isku Waqti marka Dadka Shacabka ayaa waxaa ay ku Jahwareerayaan kee ayaad dhageysataa oo ku Xirnaataa.
Shacabka Soomaaliyeed ee ka Imaanaayo Meelaha ka Baxsan Magaalada Muqdsho ee Caasimada dalka Soomaaliya ayaana inta Badan la Qabsan Dhageysiga idaacadaha magaalada Muqdisho waayo wuxuu ku Wareerayaa Midii uu Dhageysanaayo waayo waaba isku wada Mid oo meel walba Idaacad ayaa ka Qeylineyso.
Waxaa Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya ku Soo Badanaayey Idaacadaha Fara Badan oo loo Furtay Dano Gaar ah, Siyaasado Maldahan oo wali lamaareyn Kari waayey waxaana Hawada ka baxay oo uu Fishil ku yimid kuwo kamid ahna ay Shaqeynayaan.
Idaacadaha Magaalada Muqdisho ka Furnaa ayaa Tiro ahaan waxaa ay Gaarayeen ilaa 31 oo ay Maamulaan Shaqsiyaad si gaar ah u Jeedooyin Dadban ugu lahaa inkastoo qaarkood ee ku fashilmeen siyaasadihii loo furay dantuna ku kaliftay in hawada ka baxaan .
Milkiilayaasha qaar kamid ah Idaacadah ayaa awoodi waayay bixinta qarashaadka ku baxaya shaqaalaha Idaacada iyo habsami usocodka shaqada taa oo keentay in Wariyaasha iyo shaqaalihii kale ka tagaan ayna ka shaqo raadsadaan goobo kale taa oo keenta in gabi ahaan Idaacadu xiranto
Idaacado badan ayaa hada qarka iyana u saran in hawada ka baxaan kadib dhaqaalo daro soo wajahday iyo siyaasadihii markii hore loo aas aasay oo socon waayay iyo wariyaasha oo markan u shaqo tagaya kaliya meeshii ay dhaqaalo kasoo galayaan.
Magacyada Idaacadahaan ayaa ah kuwa Hada inta Badan ka Howlgalo oo Tiro ahaan Gaaraayo 26 Idaacadood oo Muqdisho si toos ah loogu Dhageysto oo ay kala Lee yihiin Shaqsiyaad Gaar ah.
Halka inta Soo Hartayna ay ku fishilmeen in ay Hawada Soomaaliya kusii Jiraan oo ay Mashquuliyan Shacabka kana Qabsadaan Dhagaha oo ay Jahwareer ku Ridaan.
1. Sky Fm 87.5
2. Qaran Radio 89.7
3. Xurmo Community Radio 96.0
4. Maanta Radio 95.5
5. Stn Radio 98.5
6. Mogadishu City Center 102.8
7. Star Fm 106.0
8. Kulmiye Radio 88.0
9. Goob joog Radio 88.5
10. Maandeeq Radio 88.8
11. Kasmo Radio 89.1
12. Radio Muqdisho 90.0
13. Dalsan Radio 91.5
14. Barkulan Radio 90.0
15. VOD Radio 93.5
16.Danan Radio 94.0
17. Iftin Radio 94.5
18. Simba Radio 95.0
19. Wadaag Radio 96.5
20. Mustaqbal Radio 97.7
21. Goal Radio 99.0
22. Haatuf Radio 101.0
23. Shebelle Radio 101.5
24. Risaala Radio 102.2
25. Banaadir Radio 103.4
26. Alnuur Radio 106.6
27. Radio Sahan
28. Radio Jubba
29. Radio Umada
30. Radio Ayaan
31-Radio Codka Nabada
W/Q: Axmed Cabdi Macow “Basbaas”